September 2019 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Burning Software Computer software PC Software
ISO ဖိုင်ကနေ Bootable USB ပြောင်းဖို့
Windows OS ကိုဖြစ်ဖြစ်၊ Linux OS ကိုဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာမှာ USB နဲ့ Boot တက်လို့ရအောင် ဒါမှမဟုတ် Windows တင်လို့ရအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် အောက်က Software လေး ၂ ခုထဲက ၁ ခုကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်.. USB Device မှာ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ USB ကိုရွေး၊ ISO ဖိုင်မှာ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ OS ISO ကိုရွေး.. Partition Scheme မှာ MBR ကိုရွေးပြီး Process/Start ကိုနှိပ်ရင် Bootable USB တစ်ခုရလာပါမယ်..
Download Rufus3.8 Portable 1 MB
Download ISO2USB 1.47 MB
Dominic Purcell at 4:12:00 PM 0
Title: Avira Phantom VPN Pro v2.28.5.20306
Avira Phantom VPN Pro 2.28.5.20306 | File Size:7MB
Windows 10 19H1 Airlock Premium v4 Permantly Activated 2019 (x64)
Dominic Purcell at 4:02:00 PM 0
Modified ISO: Windows.10.Airlock.Premium.v4.2019.Permantly.Activated
Features Enabled:3.5 net framework
Activation: Permanently Activation( Generate Digital License) v62.01
Size:6,50 GB (6.986.328.923 bytes)
New Installation Setup/background and faster
New Theme Visual Theme: Airlock Red Premium Edition 2019
New Sounds: Airlock Premium Edition 2019
New Wallpaper: Airlock Premium Edition 2019
New Cursor Set: Airlock Premium Edition 2019
Winver Logo: Stay the same as the old one (2018)
Allow Telemetry: Basic Mode
Explorer right clicks on left and click all libraries.
More Features Applications Updated:
PART 1 >> https://douploads.net/830rvios32a5
PART2>> https://douploads.net/ep828b3yb6zz
Canon Computer software PC Software Printer Resetter Tool
Cannon Service Tool v5.1.0.3
Maung Pauk at 8:00:00 AM 1
Cannon Printer တွေ၊ Copier ကို ပြင်တဲ့ Service Tool v5.1.0.3 ပါ.. Cannon က တရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ Tool ဖြစ်ပါတယ်..
Functions and Support Cannon
Download Cannon Service Tool v5.1.0.3.rar: 219 KB
Android Tool Computer software PC Software Tool
ဖုန်း Service Function စုံတဲ့ Secret Tool Pro 1.4 Full (Cracked)
Maung Pauk at 7:30:00 AM 0
Secret Tool Pro 1.4 ဟာ ဖုန်း ဆားဗစ်သမားတွေအတွက် တကယ်အထောက်အကူရစေမှာပါ..
Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Lenovo, Wiko စတဲ့ Brand မျိုးစုံ တွေရဲ့ Lock အမျိုးမျိုးတွေ၊ ပြဿနာအမျိုးမျိုးတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ Tool ဖြစ်ပါတယ်.. တကယ်အလုပ် လုပ်မလုပ်တော့မသိ.. ကျနော်ကတော့ ဒီ Tool လေး ရလာတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာ..
ဖိုင် password က www.maungpauk.org ပါ.. ဖြည်ချပြီးရင် loader ဖိုင်ကို run ရမှာ.. ဒါကြောင့် Run Loader Secret tool Pro v1.4 ဆိုပြီး ဖိုင်နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်..
Wiko frp format
Lenovo frp format
All Latest Mi Xioami EDL 9008 Test Point
Mi no Auth Account Xiaomi devices
Download Secret Tool Pro 1.4 Full.rar: 90.7 MB
Computer software PC Software PDF Softwares
Nitro Pro Enterprise v13.2.2.25 Full (PDF Creator, Converter, Editor)
PDF ဖိုင်တွေ Create လုပ်နိုင်တယ်၊ ပေါင်းစပ်နိုင်တယ်၊ ပြုပြင်နိုင်တယ်.. Adobe Acrobat Reader ထက်ပိုသွက်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်းမြင့်ပါတယ်.. Microsoft Office တွေမှာလည်း တပါတည်း Add-on နဲ့ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် ချက်ချင်း PDF အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်..
Full Version ရအောင်လုပ်နည်းကတော့
၁။ Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ.. ပြီးခါနီးရင် Launch ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ပြီးမှ Finish ကိုနှိပ်ပါ..
Patch Folder ထဲက Patch Nitro.exe ဖိုင်ကို Copy ကူးပါ..Desktop ပေါ်က Nitro Pro icon ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်ပါ.. ပြီးရင် ခုနက Copy ကူးလာတဲ့ Patch Nitro.exe ဖိုင်ကို Paste ချပါ..
ပြီးရင် Run ပါ.. Patch ကိုနှိပ်ပါ.. အစိမ်းရောင်လေးပြပြီး Patch ok! ဖြစ်သွားရင် ပိတ်လို့ရပါပြီ..
အဲဒီ Patch ဖိုင်ကို Delete လုပ်ပစ်လိုက်ပါ..
- Edit. Cut and copy text, tables and graphics from and to your PDFs, and edit in-line text.
- Secure. Configure security settings, and control the ability to print, edit and / or copy your work.
- PDF stamping & watermarking. Create custom stamps, watermarks, headers or footers, or work with our extensive library of predefined templates. Add automatic page-numbering, date- and time-stamps.
- Manage PDF navigation. Create, modify and manage full range of PDF navigation controls including bookmarks, links and default display settings.
Download Nitro Pro Enterprise v13.2.2.25 for 64bit : 175 MB
Download Nitro Pro Enterprise v13.2.2.25 for 32bit : 146 MB
Activator Computer software PC Software
Maung Pauk at 9:08:00 PM 0
Microsoft Office 2010, 2013, 2016 တွေနဲ့ Windows 7,8,10 တွေကို Activate လုပ်တဲ့ ကောင်လေးပါ..
Activator ကို မဒေါင်းခင် Antivirus ကို ပိတ်ပါ.. ပြီးမှ Activator ကိုဒေါင်းပါ..
ဖြည်ချပြီး ကိုယ့် Windows နဲ့ကိုက်တဲ့ ဟာကို Run ပါ.. ကိုယ့် Windows က 32bit ဆို 32bit File, ကိုယ့် Windows က 64bit ဆို 64bit File ကို Run ရပါမယ်..
အင်တာနက်ဖွင့်ထားရပါမယ်.. Activation ကိုရွေးထားပြီး အပေါ်နားက ကိုယ်က Windows ကို Activate လုပ်ချင်ရင် Activate Windows ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်က Office ကို Activate လုပ်ချင်ရင်တော့ Activate Office ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. သူ့အလိုလို အလုပ်လုပ်သွားပါလိမ့်ပမယ်...
Download KMSAuto.Lite.1.5.6.Portable: 9.58 MB
MIUI 11 Beta Download For Supported Xiaomi Devices
Maung Pauk at 5:06:00 PM 0
Android Tool PC Software Tool
Maung Pauk at 6:36:00 PM 0
Samsung, Huawei နဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေရဲ့ Lock အမျိုးမျိုးကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဖြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. Tool ရဲ့ Function တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ Tool ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ အသေးစိတ်ရေးပြပေးထားလို့ လုပ်နည်းတွေကိုအလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်..
လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့ဖိုင်တွေကိုလည်း Link နဲ့တကွ ထည့်ပေးထားလို့ Service သမားတွေအတွက် တော်တော်အဆင်ပြေမယ့် Tool ပါ.. ခုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ GSM Social Tool v7 မှာ Lock ဖြည်ရခက်တဲ့ Huawei Y7 2019 အတွက်လည်း Flashing နည်းသစ်တွေထည့်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်..
ScreenLock Reset (FRP/OEM On&Off)
Enable ADB (MTP Mode)
Unbrick/Downgrade ( Supported file link : https://firmware.gsm-social.com/index.php?a=downloads&b=folder&id=5126)
Source and Credit : GSM Social
Download GSM_Social_Tool_V7.zip: 27.47 MB
Mr. Win Hlaing at 10:56:00 AM 0
အဂၤလိပ္ စကားေျပာႏွင္႔ စာေလ့လာေနမ်ားအတြက္အလြန္မတန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာေတြ ေရးတဲ့ ေဆာ့ဝဲတစ္ခုပါ။ျပည့္စုံပါတယ္ ။ မသိတဲ့ ဟာဆို အသံထြက္လဲ ဖတ္လို႔ရပါတယ္။သခၤန္းစာမ်ားစြာကုိ အလြယ္ဆုံး ေလ႔လာႏုိင္ပါတယ္။ေဆာ့ဝဲကိုေတာ့ ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူပါ။
Animation Software Computer software PC Software Tutorial Videos
ပုံတွေ၊ စာတွေကို လက်ရေးနဲ့ရေးဆွဲသလို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Sparkol VideoScribe 3.2.1 Full
ဒီ Software ကတော့ သင်တန်းသင်နေတဲ့သူတွေ၊ တင်ပြချက်တွေ၊ Presentation လုပ်နေရတဲ့သူတွေ၊ Online Marketing အတွက် ကြော်ငြာ Video လုပ်ပေးနေရသူတွေနဲ့ ပိုသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်.. ပုံတွေ၊ စာတွေကို လက်ရေး၊ ခဲတံတွေနဲ့ ဆွဲနေ၊ ရေးနေသလိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်..
အောက်မှာ Video Tutorial နဲ့တကွ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင်တော့ VideoScribe Tutorial တွေကိုရှာကြည့်စေလိုပါတယ်..
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပုံတွေကို ထည့်သွင်းချင်ရင်တော့ .svg ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းပေးမှသာ ကောက်ကြောင်းတွေကို လိုက်ဆွဲပေးမှာပါ.. .svg ကိုပြောင်းဖို့က photoshop နဲ့လည်းအဆင်ပြေသလို Online မှာ အလကား ပြောင်းပေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေလည်း ပေါပါတယ်..
Download Sparkol VideoScribe 3.2.1.rar: 134 MB
Computer software Giveaway PC Software
Computer တစ်လုံးကို တစ်ချိန်တည်းမှာ လူအများကြီး ဝိုင်းသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ ASTER Home v2.26 Giveaway License Full
Maung Pauk at 5:22:00 PM 0
ကိုယ့်မှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိတယ်.. On Board Graphic ကိုမှ သီးခြား Graphic Card စိုက်ထားတယ်.. ဒါမှမဟုတ် Graphic Card ၂ ကဒ် ၃ ကဒ် စိုက်ထားတယ်ဆိုရင် VGA or HDMI Port ရှိသလောက်ကို အခြားသူတွေကိုလည်း အသုံးပြုခွင့်ပေးလို့ရပါတယ်.. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို အခြားသူတွေ ဝိုင်းသုံးလို့ရမှာပါ..
အိမ်သုံးကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို တစ်ချိန်တည်းမှာ လူတစ်ယောက်ပဲသုံးလို့ရတယ်မဟုတ်လား.. ခုက ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို လူ ၁၂ ယောက် တစ်ချိန်တည်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီ သုံးရသလို သုံးလို့ရမှာ.. လိုအပ်တာက Monitor, Keyboard, Mouse ပေါ့.. System Unit တွေထပ်မလိုတော့ဘူး..
ဒီတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကောင်းမွန်သင့်တင့်တဲ့ System Unit တစ်လုံးရှိရုံနဲ့ အခြားသူတွေလည်း ကွန်ပျူတာ အသစ်ဆင်စရာမလိုဘဲ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရသလို သုံးနိုင်ပြီပေါ့..
အဲလိုသုံးလို့ရအောင် ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ASTER ဆိုတဲ့ Software က စီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်တယ်လေ..
System Unit ကို အမြင့်ဆင်လေလေ User များများသုံးလို့ရလေလေပေါ့ဗျာ.. သေချာတာကတော့ Graphic Card စိုက်နိုင်သလောက် User တွေများများသုံးလို့ရမယ်ပေါ့..
ခုတင်ပေးလိုက်တာ လိုင်စင်ဗားရှင်းအမှန်အကန်ပါ.. Pirates မဟုတ်ပါဘူး.. Giveaway ပေးတဲ့လိုင်စင်ဗားရှင်းလေးရတုန်း ဆွဲထားကြတော့ဗျို့...
Giveaway Key : 03424-68386-64784-86291-31280
Download ASTER Home v2.26 Setup : 35.3 MB
BLOG Code Fonts Tutorial နည္းလမ္းမ်ား ျမန္မာ font
Myanmar Unicode Font Embed in Blogspot
Maung Pauk at 8:53:00 PM 0
ကိုယ်ပိုင် blog မှာ Myanmar Unicode font embed ထည့်ချင်သူများ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Unicode / Zawgyi ပြဿနာကြောင့် visitor side မှာ မြန်မာစာအမှန်မမြင်ရတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
1. Blogger Theme >> Customize >> Advanced >> Add CSS ထဲကိုဝင်ပါ။
2. Add custom CSS ထဲမှာ အောက်ပါ code များကို copy ယူထည့်ပြီး Apply to Blog ကိုနှိပ်ပါ။
font-family: 'Noto Sans Myanmar UI';
src: url(//fonts.gstatic.com/ea/notosansmyanmarui/v1/NotoSansMyanmarUI-Regular.eot?#iefix) format('embedded-opentype'),
3. မြန်မာစာကို Unicode နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ post တွေမှာ Edit html ကိုဝင်ပြီး
post ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ <span class="custom-font">
နောက်ဆုံးမှာ </span> ထည့်ပြီး Update လိုက်ပါ။
မည်သည့်ဖုန်း / ကွန်ပျူတာမဆို မြန်မာစာအမှန် မြင်ရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit : Tha Zin Ko Ko
Windows 10 19H1 Airlock Premium v4 Permantly Activ...
ဖုန်း Service Function စုံတဲ့ Secret Tool Pro 1.4 ...
Nitro Pro Enterprise v13.2.2.25 Full (PDF Creator,...
Samsung, Huawei နဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေရဲ့ Lock အမျိုး...
ပုံတွေ၊ စာတွေကို လက်ရေးနဲ့ရေးဆွဲသလို ဖန်တီးပေးနိုင...
Computer တစ်လုံးကို တစ်ချိန်တည်းမှာ လူအများကြီး ဝိ...